सानै उमेरदेखि सामाजिक सेवामा मन लगाउने लम्जुङकी जुनु गुरुङ हाल कोरियामा रहेको वुमन फर वुमन (महिलाका लागि महिला) नामक संस्थाकी अध्यक्ष हुन् । २०३४ सालमा जन्मिएकी जुनु गुरुङ समाजसेवाको भाव आफ्नो रगतमै बहेको र सानै उमेरमै घरायसी तथा सामाजिक वातावरणले आफूलाई समाजसेवी बन्न प्रेरित गरेको बताउँछिन् । कोरियामा समस्यामा परेका महिलाहरूको उद्दार तथा पीडामा मल्हम लगाउने काम गर्दै आएकी जुनु गुरुङसँग ऐक्यबद्धताका कोरिया प्रतिनिधि कृष्ण राईले गर्नुभएको कुराकानीः
के गर्नुहुन्छ कोरियामा ?
सात बर्ष भयो । पेसाको हिसाबले व्यापार गर्दै आएको छु, बचेको समय समाजसेवामा दिन्छु ।
वुमन फर वुमन कहिले र किन स्थापना गर्नुभयो ?
२०१० मा स्थापना गरेको हो । कोरियामा अहिले इपिएस, वैवाहिक र विद्यार्थी भिसामा आएका नेपाली महिलाहरूका धेरै प्रकारका समस्याहरू छन् । उनीहरूमाथि हुने तमाम अन्याय, शोषण, उत्पीडन, बिरामी पर्दा उनीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका हौँ । यो संस्थाले कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ?
हामीले यो संस्थालाई ५–६ जनाको सानो समूहबाट शुरु गरेका हौँ । तर, अहिलेसम्म संस्थामा २५० जना भन्दा बढी सदस्यहरूको ठूलो समूह भइसकेका छौँ । हामीले समस्यामा परेका महिलाहरूको लागि महिला सेल्टर स्थापना पनि गरेका छौँ । जहाँ खान र बस्नको लागि निःशुल्क व्यवस्था छ । हामीले ५ सय जना भन्दा बढी दिदीबहिनीहरूलाई सेवा दिइसकेका छौँ भने हाल पनि ९–१० जना दिदीबहिनीहरूले सेल्टरमा सेवा लिइरहनुभएको छ । हामीले यसबीचमा यहाँस्थित एक चर्चसँग पनि सम्बन्ध बढाएर सेल्टरको लागि ७० प्रतिशत आर्थिक सहयोग जुटाएका छौँ ।
महिनाको अन्तिम आईतबार निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य उपचार तथा कपाल काट्ने व्यवस्था पनि गराएका छौँ । कोरियनसँग विवाह गरेर समस्यामा परेका महिलाहरूको उद्दार गर्ने, बेरोजगार महिलाहरूलाई काम लगाईदिने, बिरामी दुर्घटनामा परेका र मानसिक अस्वस्थता भएकालाई उपचार एवं उचित परामर्श तथा सहयोग गरेका छौँ । हरेक वर्ष नारी दिवस, तिज, दशैँ, तिहार मनाउनुका साथै नारी सम्बन्धी ज्ञानबद्र्धक, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गरेका छौँ ।
कोरियामा नेपाली महिलाहरूको समस्या कस्तो पाउनु भएको छ ?
अत्यन्त जटिल छ, मुख्य त भाषाको समस्या छ । १२ घण्टा बढी काम गर्नुपर्ने, कोरियनबाट गालीगलौज सहनु पर्ने, बेरोजगार, दुर्घटना, शारिरीक तथा मानसिक पिडा, समयमा तलब नदिने, विवाह गरेर आउने महिलाहरूको समस्याहरू त झन विकराल रुपमा देखिएका छन् ।
कोरियनसँग बिहे गरेर आउनेहरूको समस्या कस्तो पाउनु भएको छ ?
कोरियामा नेपाली महिलाहरूको प्रमुख समस्या नै कोरीयनहरूसँग विवाह गरेर आउनेहरूको हो । यस्ता महिलाहरूमा ९० प्रतिशत भन्दा बढीमा ठूलो समस्या छ । मानसिक असन्तुलन भएका श्रीमती मरेका वा पोइल गएका र अनमेल (केटी २०–२२ वर्ष र केटा ५५–६० वर्षका विवाह भएकोले यो समस्या बढी भएको हो ।
कोरियामा नेपालीलाई हेर्ने दृिष्टकोण कस्तो रहेको छ ?
दक्षिण एसियन सार्क मुलुक मध्ये भारतलाई बाहेक अन्य मुलुक तथा (नेपाल)लाई हेर्ने कोरियनहरूको दृष्टिकोण अलि भिन्न छ । नेपाललाई आर्थिक स्थिति कमजोर भएको देश भनेर चिन्छन् र सोही अनुसार व्यवहार गर्छन् ।
आगामी दिनमा संस्थालाई कसरी अगाडी बढाउने सोच्नु भएको छ ?
यो संस्थाले धेरै भन्दा धेरै महिलाहरूको लागि महत्वपूर्ण कामहरू गरिसकेको छ । अझ पनि धेरै कामहरू गर्ने योजना बनाएको छ । महिलाहरूको चहराईरहेको घाउमा मल्हम लगाउने हाम्रो कर्तव्य हो । महिलाहरू मुख्यतः आर्थिक रुपले नै मजबुत हुन जरुरी छ । महिला सम्बन्धी विभिन्न महत्वपूर्ण सेवामूलक कार्य अघि बढाउन यहाँ भएको सबै सामाजिक संघसंस्थासँग हातेमालो एवम् सहकार्य गर्दै अगाडि बढाउने सोच छ ।
एउटी समाजसेवी महिला भएको नाताले विदेशमा कार्यरत नेपाली महिलाहरूलाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ ?
महिलाहरू आधा आकाश हुन् । एउटा पुरुषको सफलताको पछाडि एउटी नारीको हात हुन्छ । त्यो कुरा पुरुषलाई बुझाउन जरुरी छ । प्रवासी महिलाहरू सबै एकजुट हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ र सबै मिलेर कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथा, अन्धविश्वास, महिला हिंसाको विरुद्ध अघि बढिरहनु पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहान्छु ।
दिलशोभा श्रेष्ठको कोरिया विवादका बारेमा केहि बताइदिनु हुन्छ की ?
असहाय, निमुखा, अशक्त, बृद्धा अनि द्वन्द्वपीडित, नाबालक बालबालिकाहरूलाई हेरचाह, पालनपोषण गर्नु ज्यादै जटिल अनि कठिन काम हो । जुन जटिल र कठिन काम आमाले गरिरहनु भएको छ, त्यस कामलाई सहयोग गर्न कोरियामा आमालाई सम्मान गर्न हामीले पहल ग¥यौँ । कोरियामा रहेका बुद्धिजीवि, सामाजिक संघसंस्थाहरूको सक्रिय सहयोगमा सफल पनि भयौँ । प्राप्त सहयोगबाट आमाकै इच्छा बमोजीम केही वस्तुहरू पनि खरिद ग¥यौँ । परिणाम आफूले पनि गरी नखाने र गर्न नदिने नेपालीको उक्साहट लाग्नेबाट आमाको कमजोर आत्मबलबाट फाईदा उठाएर बद्नाम गर्न खोजियो । केही समयको अन्यौलताका बीच विवादित पुरस्कार आमाले स्वीकार गर्नुभयो । यसबारे म यति कुरा मात्र अभिव्यक्त गर्न चाहान्छु । सत्यलाई जतिसुकै ढाकछोप गर्न र असफल बनाउन प्रयत्न गरेपनि सत्य सत्यनै हुन्छ भन्ने शिक्षाको पुनः पुष्टि भएको छ ।
साभार ऐकयबद्धता मासिक